आजको राशिफल २०७७ साल असोज १४ गते बुधवार – jyotishsathi – News & Entertainment आजको राशिफल २०७७ साल असोज १४ गते बुधवार – jyotishsathi – News & Entertainment
आजको राशिफल २०७७ साल असोज १४ गते बुधवार
वि.सं. २०७७ असोज १४ । बुधवार । इ.स. २०२० सितंबर ३० । ने.सं. ११४० अनालाथ्व अधिक असोज शुक्ल चतुर्दशी
मेष राशी (चु ,चे ,चो ,ला , लि ,लु ,ले ,लो ,अ )
मेष राशि हुनेहरुको लागी आज तपाईको आर्थिक पक्ष राम्रो हुनेछ । आज शरिरमा एसिडिटी बड्न सक्छ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला । समाजमा मान सम्मान वड्नेछ । वादविवादवाट टाढा रहनुहोला । आम्दानीको स्रोतहरु बड्नेछन् । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ ।
वृष राशी (इ ,उ ,ए ,ओ , बा ,बि ,बु ,बे , बो )
वृष राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन स्वास्थमा समस्या आउने सक्ने हुदाँ व्यायाममा ध्यान दिनुहोला । चिसो पेय पदार्थवाट टाढा रहनुहोला । कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ र सहयोगले मन रमाउने छ । व्यापार व्यवसायवाट राम्रो आम्दानी हुनेछ । व्यापार वडाउन राम्रो योजनाको कल्पना गर्नुहोला । महत्वपुर्ण व्यक्तिको भेटधाटले जीवनमा सकरात्मक शक्ति मिल्ने छ ।
मिथुन राशी (का ,कि ,कु ,घ ,ङ , छ ,के ,को ,ह )
मिथून राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन मिठो वोलीको प्रभावले व्यापारमा सफलता मिल्ने छ । आफनो कार्यमा ध्यान दिनुहोला । सिर्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ । वादविवादवाट टाढा रहनुहोला । पठनपाठनमा मन जानेछ । कुनै पनि कार्यको निर्णय लिनु भन्दा पहिला पारिवारिक छलफल गर्नुहोला ।
कर्कट राशी ( हि ,हु ,हे ,हो ,डा डि, डु ,डे ,डो )
कर्कट राशिहुनेहरुको लागि आज व्यापारमा नयाँ आम्दानीको स्रोतहरु आउनेछन् । मनको चचंलता बड्ने हुदाँ कुनै पनि निर्णय हतारमा नगर्नुहोला । पुरानो साथीको भेटधाटले मन रमाउने छ । जीवनसाथीको स्वास्थमा समस्या हुनसक्छ ।
सिंह राशी ( मा, मि, मु, मे, मो,टा,टी,टू,टे)
सिंह राशिहुनेहरुको लागि आज अधुरा कार्य सवै पुर्ण हुनेछन । शत्रुहरु पराजित हुनेछन् । आज टाढाको यात्रा राम्रो नरहेकाले यात्रा नगर्नुहोला नत्र स्वास्थ खराव हुनसक्छ । साझेदारिको कार्यवाट टाढा रहनुहोला । खर्च बड्ने छ । कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ र सहयोगले मन रमाउने छ ।
कन्या राशी (टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
कन्या राशिहरुका लागि आज शत्रुवाट सावधान रहनुहोला । कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीसगं मतभेद हुनसक्छ । वाणीमा नियन्त्रण गर्नुहोला नत्र समस्या हुनसक्छ । शत्रुहरुवाट तनाव हुनसक्छ । कार्य गर्दा ध्यानपुर्वक गर्नुहोला । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्वन्ध रहन्छ ।
तुला राशी (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
तूला राशिहुनेहरुको लागि आज कुनै हराएको सामान पाउनाले मन रमाउने छ । नयाँ इष्टमित्रको भेटधाटले मनमा उत्साह हुनेछ । आज तपाई पुरा दिन आफनो परिवारलाई दिनुहोला । कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ र सहयोग हुनेछ । वादविवादवाट टाढा रहनुहोला । वाणीमा संयम राख्नुहोला । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ ।
वृश्चिक राशी (तो,ना,नि,नू,ने,नो,या,यी,यू)
वृश्चिक राशिहुनेहरुको लागि आज घरमा मागंलिक कार्यको आयोजना हुनेछ । नयाँ इष्टमित्रको भेटधाटले मनमा उत्साह हुनेछ । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ । आम्दानी भन्दा खर्च वढि हुनाले ऋण लिन वाध्य हुने हुदाँ खर्चमा ध्यान दिनुहोला ।
धनु राशी (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
धनू राशिहुनेहरुको लागि आज धनको लेनदेनमा समस्या हुनसक्छ । आफनो भित्र रहेको सकरात्मक शक्तिलाई बाहिर लिएर आउनुहोला । कार्यक्षेत्रमा आज कामको वोझले तनावको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ । आज कार्य गर्दा आफनो समुहको पनि ध्यान दिनुहोला । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ ।
मकर राशी (भो,ज,जी,खी,खू,खे,खो,गा,गि)
मकर राशिहुनेहरुको लागि आज तपाईलाई अल्छीपनाले कार्यमा बाधा अवरोध गर्नेछ । गोप्य कुरा कसै सित पनि नभन्नुहोला नत्र समस्या हुनसक्छ । कार्यक्षेत्रमा कार्य ध्यान दिएर मात्र गर्नुहोला नत्र समस्या हुन सक्छ । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ ।
कुम्भ राशी (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द)
कुम्भ राशिहुनेहरुको लागि आज आकस्मिक धन लाभ हुने योग रहेको छ । सिर्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ । कार्यक्षेत्रमा आलोचित हुने योग रहेकाले कार्य ध्यान दिएर गर्नुहोला । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ । मानसिक तनाव बड्ने हुदाँ कार्यमा हतार नगर्नुहोला । वादविवादवाट टाढा रहनुहोला ।
मीन राशी (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,च,चि)
मीन राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन आकस्मिक यात्राको योग रहेको छ । धनको लेनदेनमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । वाणीमा संयम राख्नुहोला । समाजमा मान सम्मान बड्ने छ । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । दापत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ ।
नोट – राशिफल चन्द« राशिबाट हेरिन्छ तर मेरो विचारमा लग्नवाट हेर्दा सटिक हुन आउँछ यी राशिफल सुर्य लग्न , जन्म तिथि, र नामको राशिवाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
ज्यो.अर्जुन कुमार लामीछाने
अध्यक्ष विश्व ज्योतिष महासंध गण्डकी प्रदेश
आजिवन सदस्य आई ए एफ , टेक्सस्, अमेरिका, डालास्
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको September 29, 2020 September 29, 20204महिना अगाडी 24160 जनाले हेर्नुभएको